Nomad USB-C Fiilooyinka, Nolosha | Wararka IPhone
In kasta oo Apple ay isticmaaleysay USB-C muddo afar sano ah, xiriirka noocan ah kuma noqonin mid caan ku ah aaladaha Apple illaa sanadkii la soo dhaafay iPad Pro ayaa laga fogeeyay isku xiraha danabka USB-C-kan cusub, iyo gaar ahaan sannadkan, kaas oo IPhone-ka cusub ee 11-ka ah waxay leeyihiin xeedho iyo fiilo ku shubanaysa adeegsiga noocan ah isku xirka.
Xidhiidh aad u tiro badan oo ka badan USB-Conventional, oo u oggolaanaya xawaaraha gudbinta xogta sare oo u oggolaanaysa lacag ka dhakhso badan tan ay bixiyaan fiilooyinka leh USB-ga caadiga ah ayaa ah qaar ka mid ah faa'iidooyinkeeda. Waxaan ku tuseynaa fiilooyinka cusub ee loo yaqaan 'Nomad USB-C' oo marka lagu daro ahaanshaha USB-C oo lagu caddeeyay in si dhakhso ah loogu soo oogay (shahaadada Apple MFi) Ficil ahaan waa kuwo weligood ku mahadsan Kevlar-ka ay u adeegsadaan gudaha iyo dahaadhkooda, iyo sidoo kale iskuxirayaasheeda la xoojiyay.
1 USB-C ilaa Hillaac
2 USB-C ilaa USB-C
USB-C ilaa Hillaac
Waxay u dhigantaa xarigga uu ku jiro sanduuqa iPhone-ka cusub ee 11 Pro iyo Pro Max, oo leh isku xiraha USB-C gees ka gees iyo Danab dhinaca kale. Shahaadada MFi iyo Delivery waxay damaanad qaadeysaa inay la jaan qaadi karaan xukun deg deg ah, iyadoo lagu gaarayo 50% batari nus saac gudahood ah Ilaa intaad isticmaaleyso xeedho isku mid ah, sida tan horey loogu soo daray telefoonada aan soo sheegnay. Fiilooyinkan USB-C waxay la jaan qaadayaan dhammaan iphone-yada si dhakhso leh u shaqeeya, laga bilaabo iPhone 8 iyo wixii ka dambeeya.
Laakiin marka lagu daro guryahaan, oo horeyba loogu soo daray fiilooyinka rasmiga ah ee Apple, waa inaan ku darnaa wax kuwa rasmiga ah ay ka maqan yihiin: adkeysi. Reer guuraagu wuxuu ku faanaa inuu leeyahay fiilada kaliya ee isticmaasha laba xarig oo Kevlar ah banaanka, marka lagu daro xudunta Kevlar ee siisa xariggan iska caabinta ugu badan. Wax badan ayaa ah kalsoonida ay shirkaddu ku qabto xadhiggeeda oo ay bixiso illaa 5 sano oo dammaanad ah.
Kevlar ka sokow, isku xirayaasha waxay ku dhex jiraan qaybo bir ah, waa la xoojiyay, iyo luquntooda, mid ka mid ah meelaha ugu daciifka ah ee fiilooyinkaas, ayaa sidoo kale la xoojiyay si looga hortago inay ku jabaan isticmaalka caadiga ah. Xadhiggu wuxuu leeyahay dherer dhan 1,5 mitir (rasmiga rasmiga ah ee Apple 1 mitir) oo aan waxyar ka yareynay si aan u dhigno iPhone-geena marka uu amraya, wuxuuna leeyahay silikoon loo yaqaan 'silikoon loop' oo aan si fiican ugu ururin karno inuu qaado. adigoon kudhafan fiilooyinka kale.
USB-C ilaa USB-C
Haddii waxa aan dooneyno ay yihiin fiilo aan ku isticmaali karno MacBook-geena, Pro ama iPad Pro, wax dhib ah malahan maxaa yeelay sidoo kale waxaan heysanaa diyaar, oo leh astaamo iska caabin ah oo aan horey u soo sheegnay. Labada isku xirayaasha USB-C waxay ka dhigayaan kuwo la jaan qaada mid ka mid ah alaabtaan, oo lagu daray waxay taageertaa awoodda xamuulka ilaa 100W, taasi waa, waxaan u adeegsan karnaa nooc kasta oo ah nooca loo yaqaan 'MacBook Pro' iyo wax kasta oo ka mid ah xeedho iyada oo aan laga baqayn wax.
Fiilooyinka ayaa leh 3 mitir oo dherer ah, taas oo ka dhigaysa mid aad u raaxo leh in laga qaado laptop-ka ama iPad Promaaddaama fiilooyinka ay ku jiraan sanduuqyadoodu ay aad u gaaban yihiin mararka qaarkoodna ay dhibaato ka timaaddo adeegsiga qalabkan inta ay dib u soo ceshanayaan. Wareegga silikoonku waa muhiim halkan si loo kaydiyo fiilada. Fiidiyowga waxaad ku arkeysaa kala duwanaanshaha dhismaha xariggan midka midka ku jira Ipad-ka, oo si fudud u xun.
In kasta oo aan si taxaddar leh uga fiirsaday fiilooyinkayga, haddana xubnaha kale ee qoysku waxay ku isticmaalaan guriga, haddana waxaan xaqiiqsaday in iska caabbintu ay muhiim tahay, oo fiilooyinka rasmiga ahi si qumman uma iftiimayaan tan awgeed. Nomad wuxuu na siinayaa laba fiilooyin oo lagu xoojiyay Kevlar iyo qaybo bir ah oo aad u adkaysi badan, iyo wixii aadan luminin iota shaqooyinka ay saraakiishu bixiyaan. Qiimaheeda, inkasta oo ay umuuqato mid sareeya, mustaqbalka fog magdhow maxaa yeelay waa fiilooyin "nolosha", sida ku cad xaqiiqda ah in soo-saaraha uu ku siinayo dammaanad 5-sano ah. Waqtigaan kaliya waxaa laga heli karaa bogga rasmiga ah ee Nomad (isku xirka) $ 34,95 (USB-C ilaa USB-C) iyo $ 39,95 (USB-C illaa hillaac) laakiin waxaan rajeyneynaa inay mar dhow ku jiri doonaan Amazon iyo dukaamada kale ee internetka.
Reer guuraa USB-C
Qalabka fasalka koowaad
Qiimo sare (in kasta oo ay faa'iido leedahay mustaqbalka fog)
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Nomad USB-C Fiilooyinka, Nolosha
Apple wuxuu joojinayaa inuu saxeexo noocyada firmware kahor iOS 13.1.2